Izindaba - Izinzuzo zokusebenzisa ibhokisi lamathini
Eminyakeni yamuva, ukufakwa kwamabhokisi kathayela sekuthuthuke ngokushesha emakethe yokupakisha, futhi isabelo salo siyanda. Isetshenziswe kabanzi ekufakweni kokudla, ukupakishwa kwezimonyo, ukupakisha okwenziwe ngemithi, ukufakwa kwamakhemikhali neminye imikhakha. Phakathi kwabo, amabhokisi amathini okudla enza ingxenye enkulu, eholwa ngamabhokisi wetiye namabhokisi kathayela wenyanga. Isizathu sokuthuthuka okusheshayo kokupakisha kwebhokisi likathayela asihlukaniswa nezici zaso ezihlukile. Namuhla, imboni yamabhokisi wamathini ithatha ukubheka izinzuzo ezinamandla zokupakisha ibhokisi lamathini nawo wonke umuntu.
Okokuqala, ukukhuluma ngokubukeka, ibhokisi le-tin ibhokisi ngokwalo line-luster yalo yensimbi, futhi umphumela wokuphrinta ubonakala kakhulu kunezinye izinto zokupakisha. Ngemuva kokuphrintwa kwebhokisi likathayela, imibala iyakhanya futhi yinhle, futhi amaphethini afana nempilo, angagcini ngokwandisa ubuhle bezimpahla, kodwa futhi akhombisa ukuthi izimpahla zisezingeni eliphakeme kakhulu futhi zinobuso. Ngakho-ke, abathengi abaningi bakhetha ikakhulukazi izipho ezisebhokisini likathayela lapho bekhetha izipho.
Okwesibili, ukufakwa kwebhokisi likathayela kwenziwa ngezinto ze-tinplate, ezinokuqina komoya okungcono, ukufiphaza, ukuqina nokucindezela kwengcindezi kunanoma iyiphi enye into yokupakisha, futhi kungavikela umkhiqizo ngezinga elikhulu kakhulu. Futhi ngenxa yokudonsa nokuqina kwepulasitiki, ukufakwa kwebhokisi likathayela kungenziwa kubunjwe ngezindlela ezahlukahlukene, njengamabhokisi wethini ayindilinga, amabhokisi kathayela ayisikwele, amabhokisi amathini amise okwenhliziyo, amabhokisi wethini we-trapezoidal, namabhokisi amathini ayingqayizivele. Kwenziwe kalula ngesikhunta.
Ngaphezu kwalokho, ukufakwa kwebhokisi likathayela kulungele imvelo. Ngokwenhlolovo yezimakethe zezipho ngemuva kweholide eminyakeni yamuva nje, ngemuva koMkhosi Wentwasahlobo kanye noMkhosi Waphakathi Nokwindla, izinga lokuphinda kusetshenziswe kabusha lamaphakethe amaningi angewona awemvelo liphansi kakhulu, kanti izinga lokuvuselelwa kwamabhokisi wensimbi afana nenyanga yekhekhe yenyanga amabhokisi namabhokisi amaswidi ayakhula unyaka nonyaka. Ibhokisi lensimbi lingaphinde lenziwe kabusha futhi lamukelwa njengephakethe eliluhlaza elinemvelo. Imikhiqizo ihlanganiswe emabhokisini wensimbi, angagcini nje ngokuthuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo, kepha futhi agcina izinsiza futhi anciphise ukungcoliswa kwemvelo. Ngakho-ke, emakethe yokupakisha yesikhathi esizayo enesihloko sokuvikelwa kwemvelo, ukusetshenziswa kwamaphakethe we-tinplate nakanjani kuzoba umkhuba wemboni yokupakisha.
Isikhathi Iposi: Mar-16-2018
Umlando wentuthuko nezinzuzo ze ...
Indlela ukunciphisa ukushiyeka t metal ...
Ukufakwa kwebhokisi le-Iron kuphela ongakwenza '...
Ikesi Lesitoreji se-Cd, Ibhokisi leTin, Ibhasikidi Yesitoreji Sensimbi EsineLid, Ukupakisha kweTin Box, I-Ring Pull Can Opener Uzipho, Ngokwezifiso Tin Ibhokisi,